Kedu ka m ga-esi mee ka aka m na ụkwụ m na-ekpo ọkụ mgbe anyị na-agba ịnyịnya ígwè? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agba ịnyịnya ígwè - ịchọta ihe ngwọta
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agba ịnyịnya ígwè - ịchọta ihe ngwọta
Kedu ka m ga-esi mee ka aka m na ụkwụ m na-ekpo ọkụ mgbe anyị na-agba ịnyịnya ígwè?
Popularzọ ọzọ a ma ama, ọkachasị mgbe ọ dị mmiri mmiri, na-eyi akpa rọba gburugburuụkwụmechie naima. Ọtụtụ,ndị na-agba ịnyịnya ígwèSanwichi akpa rọba n'etiti akwa sọks abụọ. Usoro ọzọ bụ itinye akpa rọba n'akụkụ anụ ahụ, n'okpuru akwa sock.18 nke 2020bọchị 2020
ma ọ bụrụ na echiche nke aka na ụkwụ oyi na-egbochi gị ịpụ n'okporo ámá n'isiokwu a, n'isiokwu a anyị ga-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ na aghụghọ banyere etu ị ga-esi zere aka ike na oyi na-atụ na igwe kwụ otu ebe gị, n'ihi na ọ dị mma, ọ na-emebi njem ahụ. , ọ bụghị ya? n'ezie na-eme ya mgbe ị ka nwere ike na-eche aka gị nke ọma, ugbu a ọ bụ oge iji nye mkpịsị aka aka gị, nwoke ziri ezi, ka anyị gaa, ka anyị ga, ọ bụ onye oyi mana gịnị kpatara anyị ji eji aka oyi Yabụ ka ahụ anyị si ebute isi anyị ka anyị na njedebe nwere ike ịlụ ọgụ, mana gịnị kpatara ya? ebe aka anyị na ụkwụ anyị na-eche oyi karịa n'ihi ifufe oyi oyi elu ifufe ịsọ ọsọ ị na-ajụkarị oyi ị ga-eche ugbu a na-egosi n'ezie mgbe ị na-arịdata site n'ugwu n'ihi na ị naghị ụkwụ ụkwụ nke pụtara na ị naghị eme mgbatị ahụ kpoo ahụ gị na njedebe gị ma ikuku na-echi elu nke pụtara na ị ga-enwe ezigbo oyi, nke ka elu na-arụ ọrụ nke na-ekpo ọkụ ị ga-eche na mbụ ma ọ kachasị ma ọ bụrụ na ị na-alụ ọgụ megide ikuku ifufe, chọrọ nchịkọta gloves. Ee, enwere narị puku narị dị iche iche nke ụdị aka aka dị iche iche, ha niile nwere ntọala na ịdị iche dị iche iche, mana anyị ga-atụ aro ịzụrụ otu uwe aka na-agba ịnyịnya ígwè ka ị ga - enwe ike ijide aka nke uwe aka ejiri mara nke nne nne gị mere gị Iji chekwaa ha maka nkịta na-ejegharị, ọ bara uru ịkọ, ọ bụ ezie na ịnwere ike ịnweta tọn nke uwe aka dị iche iche, ha niile bụ maka ọnọdụ dị iche iche na ọnọdụ dị iche iche, ị nwere ike ịchọpụta na gloop neoprene bụ ezigbo ezigbo nhọrọ, emere ha nke otu ihe Ihe dị ka wetsuits na obere mmiri mmiri ahụ na aka gị yana yabụ aka gị ga-eme ka mmiri kpoo ọkụ ma debe aka gị mma ma kpoo ọkụ Etinyela uwe aka ahụ mgbe aka gị na-ajụ oyi n'ihi na ọ nweghị ọrụ m ga - eme ka aka gị oyi won't gaghị achọ aka gị oyi, ee, dabara nke ọma ck anyị nwere obere uwe aka n'ihi na ọ bụghị oke oyi nke zuru oke maka ụbọchị anwụ nwụrụ, ka anyị ghara ichefu ụkwụ anyị ugbu a ị ga - enweta ụfọdụ pụrụ iche w akpụkpọ ụkwụ ndị a maara dị ka booties, nke nwere ihe na-egbochi ihe, kamakwa onye na-enweghị mmiri na-ekpuchi mmiri nke nwere ike ichebe gị na mmiri dị n'okporo ụzọ, kamakwa ọdịda nke okpomọkụ, kamakwa ịhụnanya nke ịnyịnya ígwè bụ ịgba ịnyịnya na-agafe agafe ugbu a nke a na-emepụta ọzọ oyi akwa nke na-agafe n’elu akpụkpọ ụkwụ gị na-agba ịnyịnya ígwè nke na-enye gị ntakịrị mkpuchi Ugbu a enwere narị otu narị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị puku, nke ụdị dị iche iche nke oke mmiri, yabụ họrọ nke zuru oke maka ihu igwe ị ga-agagharị na ọnọdụ okpomọkụ ị ga na-agba ịnyịnya ma tupu ị mara ya, ị ga-enwe ezigbo ụkwụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụrụ na ị na-eji akpụkpọ ụkwụ ịgba ịnyịnya nkịtị ị ga-eme n'oge ọkọchị. Ndụmọdụ dị mma bụ ịkwanye oghere ka ikuku oyi niile ghara ịkpụ site na akpụkpọ ụkwụ gị n'ụkwụ gị, na-atụ anya igbochi mkpịsị ụkwụ oyi, nke bụ isi ọzọ kachasị elu maka ịkwọ ụgbọ mmiri na ihu igwe na agbanyeghị tinye akpụkpọ ụkwụ gị n'okpuru ngụgụ gị ma ọ bụ ụkwụ gị na-ekpo ọkụ n’ụzọ ahụ ọ ga-eme ka mmiri zoo, ma mmadụ ọ dị mma n’ebe a, ọ naghị ele ya anya nke ọma, ọ naghị ajụ oyi, ọ bụghị maka ịdị jụụ, ọ gbasara maka ịnwe ọkụ eeh nke ọma na-arụ ọrụ gbasara ọdịdị mara mma ọ bụghị nke ọma na ị ga-ahapụ ya otu a ọ naghị ezokarị mmiri ozuzo, yabụ echere m na m ga-adị mma, ọ dị mma, ka anyị gaa, ị nwekwara ike itinye ego na sọks ụfọdụ a kapịrị ọnụ n'oge oyi. thicker na taller gị ụkwụ elu ka gị na nkwonkwo ụkwụ na-ekpo ọkụ kwa, otú ị pụrụ ịhụ na m nyekwara ke a ụzọ nke ukwuu osisi oyi sọks naanị n'ihi na ha na-Christmas sọks, na-ekpo ọkụ ọ bụghị na ha na-ekwu okwu banyere oyi, ezi oge, mana m ga-eme ya okpukpu abụọ na sọks Ana m eyi ụzọ abụọ dị oke mma n’oge a ma ọ bụrụ na ị ga-agọpụ e m Aga m etinye na sọks m sọks.
Enwekwara ntuziaka ole na ole enwere ike itinye n'ọrụ mgbe ị na-agba ịnyịnya na otu n'ime ndụmọdụ ndị a dị elu na-atọpụ akpụkpọ ụkwụ ịnya ịnyịnya ka ọ kwụsị igbochi mgbasa ozi ọ bụla na mkpịsị ụkwụ ka ọbara dị mma nwere ike ịba na nsọtụ nke na-agbakarị ụfụ. Otu ihe ahụ bụ maka ogwe aka na aka uwe gị. Ou chọrọ iweta otu uwe aka abụọ na-esighi ike ka ọbara wee nwee ike ịgbasa na aka gị, yana ezigbo mkpuchi dị n'èzí nke nwere ike ịdakwasị ihe mkpuchi gị site na aka gị, ọ dị m ka ego a dị n’elu.
Ihe ọzọ ị ga-eburu n’uche bụ ụdị njem ị na-agba, ọ ga-abụ otu njem nke anaghị etinye nnukwu mbọ, ka ọ ga-abụ nke siri ike? Ga - echekwa obi dị elu ma ọ bụrụ na ọ bụ njem dị mfe karị, buru akwa aka dị mkpụmkpụ ma ọ bụrụ na ọ bụ njem siri ike ị nwere ike ịnwe usoro ị ga - arụ, ọ ga - esiri gị ike ịrụ ọrụ ọkụ karịa, yabụ chee echiche banyere ya Kedu ụdị ịgba ịnyịnya ị na-aga n'ụdị njem dị a we'reaa ka anyị na-agakarị bụ nke dị mfe karịa ka anyị wee banye maka nke ahụ dịkarịrị ala gloves ịta ụta gị nwekwara ike imetụta etu aka gị si dị ugbu a ị nwere ike ịnagide ya gaa n'ihu na nke a, mana mgbe ị nwere nnukwu dobe si na sadulu gaa n'ụlọ mmanya, a ga-enwekwu ibu gị na aka gị, nke pụtara nrụgide karịa, na-eme ka o siere gị ike ịgbasa iji nweta mkpịsị aka gị. Yabụ ọ bụrụ na ị na-agba mgba, gbalịa izu ike iji mee ka ogwe gị dịtụ elu ka ị wee nwee ike iwepụ aka gị ma nwee olile anya na ọbara gị ga-abanye aka gị. Okwesiri ighota na oburu na ijidesi aka gi ike, i gha eme ka o nwekwuo nsogbu, ya mere obara gi gha acho isiri gi ike rue na aka gi mgbe ị na-anọdụ na ogwe, yabụ nke ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, jigide isi gị, nke ahụ nwere ike ịnwe jaket na-enweghị windo ma ọ bụ nke na-enweghị mmiri, ọ dị ezigbo mkpa idobe ya iji mee ka ụkwụ na ogwe aka gị dị mma ma na-ekpo ọkụ, nke a bụ maka ndụmọdụ anyị kachasị iji mee ka aka na ụkwụ gị na-ekpo ọkụ mgbe ị masịrị isiokwu a biko nye ọ bụ nnukwu mkpịsị aka ukwu ma enwere m olile anya na ị ga-eme ka aka gị dị ọkụ na m oge ọzọ ị ga-erute ya, ọ dịghị nke ịnyịnya gị ga-emebi ụkwụ oyi agaghịzi asị ndị ntị chiri Aka na nnabata ọkụ oh
Ime aka na-agba ịnyịnya na-eme ka aka gị dị ọkụ?
Aka gị na-ekpo ọkụelu dị kanke gina-agba ịnyịnya, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya n'ike, dị kaiheọbara na-agba gburugburunke giahụ ka mma. Fọdụndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ikeanabataghị mkpauwe igwe kwụ otu eben'oge oyi n'ihi nke ahụ.Cygba ígwèkpoo ahụ ọkụaka gin'ụzọ dị irè karị ma ọ bụrụuwe aka gi, ihe obulanke haọkpụrụkpụ, bụkpoo ọkụna akọrọ iji malite.Dec 6 2017
ime gia ehiwe
(Air Rush) - Nnukwu ihe kpatara na ị ga-enweta aka na ụkwụ oyi bụ n'ihi na mgbasa gị adịghị mma, yabụ gbaa mbọ hụ na akpụkpọ ụkwụ gị tọpụ ma ọ bụghị akpachapụ anya iji kwe ka ọbara si na isi gị banye na mkpịsị aka gị na Mkpịsị ụkwụ na-agba ọsọ. You na-achọgharị mkpịsị ụkwụ gị enyi? - Ana m agbalị kwa.
Wiggle wiggle wiggle.- Nwata, o juru! (Rock music) Ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ na-agba ịnyịnya ígwè nọ ebe ahụ ka emebere iji mee ka ụkwụ gị dị jụụ n'oge ụbọchị ọkọchị, nke pụtara nza nke ikuku oyi na mmiri. Nwere ike iji teepu duct mee nke a.
Mechie oghere ndị dị ka, echere m, ọ bụghị nke ahụ na-atọ ụtọ, mana ị nwekwara ike iwepụ ihe mkpuchi ahụ wee kpuchie oghere ndị ahụ naanị ya na ụzọ ndị ọzọ ma ị ga-enwe ezigbo ụkwụ na-ekpo ọkụ. Zuru okè maka oge oyi. Nri, ọ bụrụ na teepu m anọgide. (Mkpuchi agbasiri ike) (egwu rock) - E nwere ọtụtụ ụdị uwe dị iche iche dịka aka dị iche iche, mana ọ dị oke mkpa na ị nwere kit nke ga-arụ ọrụ n'ọnọdụ ị na-ezube ịga.
Ugbu a ebe a na Europe anyị nwere ike n'ozuzu na pụọ ​​nanị na a mara mma oké ụzọ nke oyi uwe. N'ihi na nke ahụ abụghị n'ezie n'ezie n'ezie oyi ebe a, ọkachasị UK. Na mkpokọta, ọnọdụ okpomọkụ anaghị agbanwe nke ahụ na gi ọ bụla.Ma ọ bụrụ na ibi n'ebe ihu igwe dị njọ karị ma ọ bụ ebe okpomọkụ na-agbanwe karịa ụbọchị, ị nwere ike ịtụle ihe ọzọ mpe mpe akwa, ma ọ bụ liner.
Yiri uwe na-adaba adaba n'okpuru mkpuchi oyi nke nwere ike iwepu ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ agbanwee ma ọ na-ekpo ọkụ n'oge ụbọchị ma ọ bụ ọ bụrụ na aka gị dị mmiri, dochie ya na liner dị iche n'etiti afọ (bass strums) - Unsurprisingly ọ bụ a mmiri na oyi na-atụ ụbọchị ebe a na UK na ọ bụrụ na ị chọrọ na-ata ahụhụ site na mmiri na oyi na-atụ aka mgbe a mbanye anataghị ikike ga-enyere gị aka n'ezie na ọ na-agụnye ụfọdụ latex uwe saddlebag mgbe na-akwadebe gị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ na-etinye ya na gị azụ n'akpa uwe na mgbe ọ mmiri ozuzo ị nwere mmiri mmiri, tinye ya na nke ahụ pụtara na ogwe aka gị nwere ike ịmị mmiri, mana aka gị ka ga-akọrọ nwere ezigbo oyi na-atụ aka na ememe ma ọ bụrụ na ịchefu uwe aka gị, ị nwere ike ịbanye mgbe niile gaa ọdụ gas ma ọ bụ ebe a na-ere mmanụ ụgbọ, dozie ha, Bob bụ nwanne nna gị, ebe ahụ ka inwere ya. Ọ dị mma, aka na-ekpo ọkụ ma na-akọrọ aka. (Obi ụtọ orchestral music) - Maka ugo - N'ebe ahụ n'etiti gị, ị nwere ike ịchọpụta na anaghị m etinye sọks ọkụ m taa, mana sọks oyi.
Ndị a nwere ihe ikuku na-egbochi mmiri na mmiri na-enweghị mmiri, ha bụ nhọrọ mbụ m, agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta sọks oyi ma ọ bụ na ị na-agba ọsọ ma chọọ itinye sọks sọks, na-eme ka okpukpu abụọ dị okpukpu abụọ iji mee ka ị kpoo ọkụ. Maka na ị kpọchiri ikuku na-ekpo ọkụ n’etiti n’etiti onye ọ bụla. Naanị ihe ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-eyi akwa ụkwụ n'ụkwụ gị bụ na ọ bụrụ na ị nwere akpụkpọ ụkwụ siri ike karị, ị nwere ike ịnwe nsogbu ịbanye ụkwụ gị. Ọ bara uru inwe akpụkpọ ụkwụ nke abụọ maka oge oyi, nke nwere ike ịbụ naanị ọkara nha buru ibu. (Orchestral Music Na-aga n'ihu) - Usoro GCN ọdịnala iji mee ka ụkwụ gị dị mma ma kpoo ọkụ iji ụfọdụ mpempe akwụkwọ aluminom.
Aluminom foil bụ ezigbo insulator nke mere na ejiri ya esi nri. Ugbu a jide n'aka na ị ga-enweta ọmarịcha nnukwu mpempe dị ka nke a, kechie ya na ụkwụ gị na nke ahụ niile kwesịrị idobe ọmarịcha mma na ahụ ọkụ pụọ n'ụkwụ gị ndị tọrọ atọ na akpụkpọ ụkwụ gị. Tinye akpụkpọ ụkwụ gị wee nweta overshoes gị ma ọ bụrụ na i nwere nke ọ bụla ma ị nwere ya! Nicekwụ mara mma, na-ekpo ọkụ ma kpuchie ya.
Zuru okè maka ọnọdụ okpomọkụ ọ bụla belụsọ ma ọ dị oke oyi ịpụ. (chuckles) (eletriki guitar strummers) - Mgbe a na-achọ hacks iji kpoo ọkụ ma kpọọ nkụ n'oge oyi, ụfọdụ n'ime ndị kachasị mfe bụ ndị kachasị dị irè ma bụrụkwa ndị kachasị ọnụ. Enwere ike ịhọrọ ihe nkiri nri.
Enwere ike ịzụta ya dị ọnụ ala na ụlọ ahịa gị, yana ọ dị mfe iji. Just na-agbatị ụkwụ gị niile na ihe dị mma maka ihe nkiri ịrapara bụ na ọ na-arapara n'ahụ ya ka ị ghara iji nke ukwuu. Naanị kpuchie ụkwụ gị na nkwonkwo ụkwụ gị mgbe ị na-eyi akwa mkpuchi wee belata oghere maka mkpịsị ụkwụ gị ma nwee ụkwụ na-eduzi osimiri, na-egbochi ihu igwe.
Kpachara anya, ọsụsọ ga-agba ụkwụ gị, mana opekata mpe ọ ga-ajụ oyi. (Rock Rock) - Ọ bụ otu n'ime oge oyi nke oge oyi, na aka gị anaghị eme aghụghọ ahụ, na-eme ka aka gị dị ọkụ dịka ịchọrọ. Ehe, enwere m ezigbo aghụghọ nke uwe m nwere ike igbochi aka gị ịjụ oyi.
A na-eme nke a iji gwọọ akwara maka mgbu na ihe mgbu, mana ị nwere ike ịzụta ha na ụlọ ahịa ọ bụla ma ọ bụ ụlọikwuu na ha na-abịa n'ụdị dịgasị iche iche ma ha ga-adịgide ruo awa ole na ole ma nwee ike igbochi aka gị ka ọ bụrụ mgbochi nke ice . Ihe ị ga - eme bụ dọka azụ gị, tee ya na aka gị, tinyeghachi ya na aka aka gị, na - ejide n'aka na ihe ị na - eme anaghị egbochi ọbara gị. Ya mere, debe ihe niile dị mma, ọbara na-ekpo ọkụ nke na-esi na isi gị ruo n'aka gị mgbe ahụ ị kwesịrị ịnwe mmetụ ọkụ dị mma na aka gị nke ga-eme ka ọ dị mma ma dị ọkụ ruo mgbe ị lọtara n'ụlọ ma nọdụ n'akụkụ ọkụ n'olu dara ụda) Oke.
Oh, nke ahụ dị mma. Chei! (Rock Music) - Ọ bụrụ na oge oyi ndị a niile abụghị oge, mgbe ahụ naanị otu ihe fọdụrụ ime na nke ahụ bụ itinye ego na ngwa ngwa oyi a kwadebere maka ọnọdụ kachasị njọ m na-ekwu maka snow, ice , oke mmiri ozuzo na okpuru mmiri efu. Dịka ọmụmaatụ, booties Fizik Artica R5 ndị ​​a, nke m ga-eyi naanị n'ọnọdụ kachasị njọ, mee ka ụkwụ gị kpoo ma kpọnwụọ maka ọtụtụ ụgbọ ịnyịnya kachasị njọ, ihe na-egosipụta echiche, mkpọchi mkpuchi na ajị anụ n'ime nke pụtara na ha bụ nke gị Mee ka ụkwụ kporo ọkụ ma kpọọ nkụ n'ọnọdụ ọ bụla.
Nanị nsogbu bụ na ọ nwere ike ị chọghị ịnya ịnọdụ n'ọnọdụ ndị a. - Ugbu a, anyị nwere olile anya na ihe ndị a niile enyerela gị aka ịchekwa aka na ụkwụ gị mma na ịnwụ ọkụ na njem ndị ahụ. - Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, nye ya nnukwu mkpịsị aka wee mee ka anyị mata ma ọ bụrụ na ị chere na anyị atụfuru ihe ọ bụla .- Maka ndị ọzọ esi-ederede, pịa ebe ahụ n'ihi na ọ na-enweta mmiri na oyi, anyị ga-agakwa, don ' anyị - Oh, anyị na-eme - Ugh.
Kedu ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè si eme ka ụkwụ ha na-ekpo ọkụ n'oge oyi?
Zọ omenala nkeIdebenke giụkwụ na-ekpo ọkụ mgbe ịgba ígwèbụ itinye mkpuchi n'elu ha. Overshoes sitere na nhọrọ oke ikuku ikuku dị mfe na ụdị dị arọ nke ejiri ihe eji egbochi mmiri.
Ngwunye aluminom ga-eme ka ụkwụ gị kpoo ọkụ?
Ọ na-ada nzuzu mana ee,tin foiln'imenke giakpụkpọ ụkwụ. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ahụokpomọkụfuru efu site na isi naụkwụ, ị nwetaradebe ụkwụ gịnamkpịsị ụkwụ na-ekpo ọkụỌzọkwa.Tin foilanaghị ejigideokpomọkụma yana-emeoké ọrụ nkena-edebe okpomọkụna na oyi na-atụ si. Maka mmeziimanwaa imechinke gidumụkwụn'imetin foil. Nov.
Gịnị mere ụkwụ m ji ajụ oyi ma m gbaa ịnyịnya ígwè?
Nke anyiụkwụzaa n'ogeịgba ígwè, n'ihi ụba ọbara na-achọ site na ọrụ ahụ ike. Ọtụtụ mgbe, ndị na-eme egwuregwu nwere mkpịsị ụkwụụfụyi akpụkpọ ụkwụ ndị pere mpe, ma ọ bụ sie ike nke ọma na mbido nke ịnyịnya ahụ, nke na-egbochi ịnye ọbara na irighiri akwara, si otú a na-akpataụfụ.Dec. 18 2017
Maka ụfọdụndị na-agba ịnyịnya ígwè, nọkwa aigwe kwụ otu ebena okpomọkụ ọ bụla dị n'okpuru 50 degrees Fahrenheit bụezigbo oyi. Maka kọlụm a, 'ezigbo oyi'akọwapụtara dị ka n'okpuru 32 ogo.
Ndi sọks sọks abụọ ga-eme ka ụkwụ gị kọọ ọkụ?
Dabere na Joshua Kaye, onye podiatrist na L.A.,yi sọks abụọkamee ka ụkwụ gị kpoo ọkụbụ ihe omumu na ihe efu. “Nke abụọụzọcompressụkwụ gị, igbupụ mgbasa na emeụkwụ gịoyi karịa ka ha ga-adị na otuụzọ.30.01.2018
Kedu akụkụ nke ahịhịa aluminium na-egbu egbu?
Ebe ọ bụ naaluminom foilnwere ihe na-egbu maramaran'akụkụna dulln'akụkụ, ọtụtụ ihe eji esi nri na-ekwu na mgbe ị na-esi nri esi nri ma ọ bụ nke ejiri ya mechiealuminom foil, nke onwunwun'akụkụkwesịrị ịgbada, chee ihu nri, na dulln'akụkụelu.Ọkt 19 2016
Ọ dị mma iji kechie ụkwụ gị na mpempe akwụkwọ aluminom?
Ee, ị nwere ike ịgba ọsọeluusoro ọgwụgwọ mgbe ị na-arịa ọrịa site na oyi ma ọ bụ flu. Usoro ahụ dị mfe, mana ọ chọrọ ntakịrị ntakịrịaluminom foil. Malite site nana-emechi ụkwụ gịna 5-7 n'ígwé nkefoil. Nyeụkwụ gịezumike 2-awa, weekechieọzọ 5-7 n'ígwé gburugburuụkwụ gịmaka otu awa.
Cycgba ígwè ọ siri ike n'oge ihu igwe?
Azịza ha nyere gụnyere njupụta ikuku (ọ dịkarịrị ala ma na -emepụta nguzogide ikuku naoyi na-ajụ oyi), ogige igwe (taya nwere ike ịda nwayọ nwayọ mgbe ha dị.)oyi), na ahụ mmadụ (mọzụlụ anaghị arụ ọrụ nke ọma naoyi).
njem njegharị nke France
Oyi adighi nma maka igwe igwe?
Oyiokpomọkụ, na nke onwe ha, anaghị emebi emebi aigwe kwụ otu ebe. Dịka ọmụmaatụ, na-eweta aigwe kwụ otu ebesite naoyin'èzí ikuku na ikuku na-ekpo ọkụ n'ime nwere ike ime ka mmiri kpuchie n'ime etiti ahụ, nke nwere ike iduga nchara.Bọchị 3 2012
Kedu ihe m nwere ike iji mee ka aka m kpoo ọkụ n’elu igwe kwụ otu ebe?
Ọ bụrụ na ị na-eme naanị ahụ iru ala, kwụ ọtọ na njem igwe kwụ otu ebe, mgbe ahụ mittens ga-eme ka aka gị dị ọkụ karịa uwe aka. Ma maka ịnya ụgbọ elu dị mkpa nke chọrọ ngbanwe na nkwụsịtụ, gloves ga-enye gị nkụda mmụọ ịchọrọ.
Kedu ka esi eme ka aka gị dị ọkụ n'oge oyi?
Ma eleghị anya, ị ga-enweta okpu agha aero nwere obere oghere maka oge oyi. Ọ ga - eme ka isi gị kpoo ọkụ ma nyere obere aka mgbe ị na - alụ ọgụ na isi Arctic. Ptgbaso usoro ịbịakwute uwe gị na-eme ka mgbanwe dịkwuo ukwuu ma ọ bụrụ na ọnọdụ gbanwere mgbe ị na-apụ na, ebe ọ bụ na e nwere ikuku dị ọkụ n'etiti oyi akwa ọ bụla, ha ga-adị ọkụ karị.
Kedu ihe ị ga-achọ na aka na-ekpo ọkụ?
Ezigbo ihe na-ekpo ọkụ dị obere iji tinye ya na uwe aka gị ma ọ bụ n'akpa uwe gị. Ọ dịkwa mma iji gbochie ịgagharị nyocha gị n'èzí. Ma olee otu i si mara ihe kachasị mma iji kpoo gị ọkụ? Nke ahụ bụ ebe anyị batara! N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị ga-agagharị gị n'ihe ị ga-achọ mgbe ị na-azụ ndị na-ekpo ọkụ ọkụ.